यसपालीको भदौ १४ खास हुनेवाला छ । तपाईं ठान्नु होला संविधान सभाको म्याद थपिने भएर वा नथपिने भएर खास हुने वाला छ भनेर । सवाल राजनीतिको होइन संस्कृतिको हो । पुरुषको होइन महिलाको हो । हो, यसपालीको भदौ १४ नेपाली महिलाको महान पर्व तीजको दिन हो । मजाले लाउने......मस्त खाने........बेस्सरी नाच्ने.....। त्यो पनि झ्याउरे भाकामा बरिलैको लेग्रो तानेर हैन, -यापमा....लेट्स ह्याब अ सेलिब्रेसन, दिस इज आवर ट्रेडिसन... भन्दै उही चिरपरिचित गायिका कोमल वलीसँग । लाग्छ नेपाली शहरमा अब शिला की जवानीको पनि केही चल्नेवाला छैन । मुन्नीको बदनामीको पनि कसैलाई मतलव हुने वाला छैन । किनभने त्यो भन्दा चर्को जवानी कोमल वलीको यहीँ देखिने छ मिनी स्कर्टमा र बदनामी हुनेछ फास्ट बिटको कमअन..कमअन...मा । नपत्याए हेरे हुन्छ बबाल तीज.... । तीजको रौनक भर्ने कोमल एक्ली छैनन् । एक से एक गायिका तयारी हालतमा देखिन्छन् तीजको बजार लुट्न । गायिका मात्र कहाँ, यहाँ त गायक पनि छिरिसकेका छन् रातो साडीका तीजे महिलाको भीडमा । बिचरा हाम्रा गायक–गायिका र रचनाकार । यिनीहरुले शब्दकोषमा राम्रा शब्द पनि भेट्टाएनन कि खै ? नत्र किन छाडा गीतले राज जमाइरहेको छ बुझ्न कठिन छ ।
२१ औं शताब्दीका भनिने हामी नारी । रीतिरिवाज, चाडपर्व र धर्मसंस्कृतिले धनी हाम्रो देश । हामीे विश्वसामु त्यसैमा गौरव गर्छौ तर आज त्यही रीतिरिवाज र चाडपर्वलाई विकृतिमय बनाउन उद्धत छौं । रेडियो सुन्यो, टिभी खोलेर हे-यो, लोग्ने र सासूलाई गाली गरेका गीत बज्छन् । सासु र श्रीमानसँगै बसेर टिभी हेर्न पनि अप्ठेरो भो अब त । सासूले बुहारीलाई दल्ने, लोग्नेले श्रीमती कुट्ने– पहिलाको त्यो जमाना कहाँ छ र अहिले ? के सासूकै कारण माइत जान नपाउने बुहारी छन र अब ? बरु पहिला धेरै सासूले बुहारी सताउँथे, अचेल धेरै बुहारीले सासू सताउँछन् । समय ठीक उल्टो भएको छ, गीत भने उस्तै छन् । उस्तै मात्र हैन झन चर्का ! चन्दा उठाएर पार्टी प्यालेसदेखि तारे हाटेलसम्म पुगेर दर खानुपर्ने । संगिनी मिलेर म्यारिज खेल्नुपर्ने ।
बियर, वाइनको सुरमा झुम्नुपर्ने । श्रीमानको रबाफ लगाउनुपर्ने । मेरो बुढो मेनेजर छ तेरो अफिसर । मेरो बुढा यस्तो, तेरो उस्तो । यस्तै यस्तै भनेर । आखिर मान्छे बिग्रिएरै संस्कार बिग्रिएको हो । मलाई साह्रै डर लाग्न थालेको छ– यसरी नै बिग्रदै गयो भने हाम्रो समाज कहाँ पुग्ला ? तीज आउन निकै समय बाँकी रहँदै महिला दिदीबहिनीहरु संस्कृति नै बदनाम गराउने गरी आधुनिकताका नाममा तीजको मौलिकता नै फेर्न लागिपरेका छन् । हिजोका दिनमा तीज मन्दिर, चौतारामा महिलाहरु भेला भएर मनाउने गर्थे तर अहिले पाँचचारे होटल, डान्सबार, पार्टी हलमा तीजको भाका सुनिन थालेको छ । राम्रोभन्दा नराम्रो बढी भएपछि असल पनि गुम्दोरहेछ । गाउँमा आङ ढाक्ने चोलो र लाज ढाक्ने गतिलो फरिया नभएर तीजमा कुनै चेली माइत जान पाएकी छैनन । काठमाडौंका जो आफूलाई शिक्षित र विद्वान मान्ने गर्छन् उनीहरु तारे होटलमा बियर, रक्सी र सितारा भरिएका पहिरनमा ठाँटिन्छन ।
सामान्ती समाजमा जसरी महिलाहरुलाई गहना र भड्किलो कपडाले सजाएर काम बासनाको साधन बनाइन्थ्यो , त्यसैगरी अहिले हामी महिलाहरु आफैले आफूलाई त्यसरी प्रस्तुत गर्छौं भने त्यसलाई के भन्ने ? तीज अर्काको देखासिकी गरेर नमनाऔ“ । आफ्नै तरिकाले मनाऔं । तडकभडक गर्नुभन्दा जनचेतना फैलाउनु उद्देश्यले मनाऔं । महिला दिदीबहिनीले गाएका गीतले शान्ति र संविधान निर्माणका लागि दबाब होस । महिलामैत्री संविधान बनोस् । २०६८ सालको तीजको यही शुभकामना !!